कसरी पाक्छ प्लाष्टिकको चामल ? यस्तो छ सत्य – जनस्वास्थ्य खबर
कसरी पाक्छ प्लाष्टिकको चामल ? यस्तो छ सत्य
हाम्रो भान्समा कस्तो चामल पाक्दैछ ?, हामी कस्तो चामल चपाइरहेका छौ ? कतै त्यो प्लाष्टिकको त होइन ?
(लेखक स्पार्क हेल्थ होम हस्पिटल्स, कालीमाटीका निर्देशक हुन्)/ (स्रोत onlinekhabar)